Fiara lasantsy na gazoala: Inona no tokony hovidianao? - Victor Mochere
Ny adihevitra momba ny lasantsy na ny gazoala dia nampientanentana sy nampisafotofoto ny mpamily nandritra ny am-polony taona maro - ary tsy dia nampiana firy tamin'ny fitomboan'ny olana momba ny kalitaon'ny rivotra. Na izany aza, ny gazoala dia tsy maty ary amin'ny toe-javatra sasany dia mbola mijanona ho safidy mazava ho an'ny mpamily sasany miankina amin'ny lafin-javatra maro azo ampiharina - fa tsy ny safidin'ny tena manokana. Ny fampitahana lalina ataonay dia mandinika ny zava-bita sy ny fomba fitondran'ireo motera roa ireo, miaraka amin'ireo sarany sy lafin-javatra maro momba ny tontolo iainana mifandray amin'izy ireo hanampy anao hanao safidy tsara.
Performance sy mitondra fiara
Eto izahay dia mijery ny toerana misy anao mitondra fiara, ny fomba fampiasanao ny fiaranao ary ny fampiasanao azy mba hahitana izay karazana solika mety indrindra amin'ny filanao.
a. Inona no maha samy hafa azy ireo amin'ny fampisehoana?
Amin'ny ankapobeny, ny lasantsy dia matetika hita ho toy ny fiara malefaka kokoa miaraka amin'ny valiny maranitra kokoa sy ny fahavononana hiova, raha ny diesel kosa manana torsi tsara kokoa (hery misintona), izay mahatonga ny fiara miala sasatra kokoa. Na izany aza, ny maotera lasantsy turbo-charge maoderina dia manome hery ambany be, fa ny diesel farany dia mamaly - sy ny feo - mitovy amin'ny motera lasantsy. Efa ela no tsy nisy intsony ny gazoala fikojakojana sy fambolena. Raha jerena ny roa amin'ny fomba fijery ankapobeny dia mbola azo lazaina hoe:
Mila amboarina ny maotera lasantsy mba hanome ny tsara indrindra, mba hifanaraka amin'ny fomba mitondra fiara 'sportier' - ary, amin'ny fanitarana, boaty fanoroana tanana.
Ny Diesel dia mifanandrify tsara amin'ny ody amboarina amin'ny boaty mandeha ho azy satria amin'ny ankapobeny dia tsy miompana amin'ny fihodinana ambony amin'ny fiaingoam-pandeha ambany ny torque azy.
Izany akory tsy midika fa ny motera lasantsy dia tsy afaka miala sasatra na ny diesel tsy afaka mampifalifaly, mbola misy zavatra tokony hodinihina, koa andao isika handinika lalina ny zavatra.
b. Mampiasa ny fiaranao ve ianao amin'ny fiarandalamby na lalana ambanivohitra?
Tena tsara eny amin'ny làlambe ny Diesel, izay ahafahan'izy ireo misongona haingana. Fanampin'izany, ny fiara làlambe dia mirona hiakatra kilaometatra mihoatra noho ny toerana hafa izay midika fa tsara kokoa ianao amin'ny gazoala izay matetika mamerina mpg (kml) tsara kokoa. Ny fiara amin'ny lalambe ihany koa dia manome ny tenany amin'ny karazana fiara ilaina amin'ny fitazonana sivana solitany - bebe kokoa momba izany amin'ny fizarana manaraka. Amin'ny lafiny iray, ny fiara amin'ny lalana ambanivohitra, dia hifanaraka kokoa amin'ny maotera lasantsy peppier, izay azo inoana fa hanome traikefa mahafa-po kokoa amin'ny fiara ary mety kokoa amin'ny hafainganam-pandeha haingana rehefa misongona fiara miadana kokoa toy ny traktera.
c. Matetika ve ianao no mitondra fiara lavitra na fohy?
Ampidiro ny olan'ny sivana particulate diesel mampatahotra. Ny sivana particulate Diesel (DPFs) dia maneho lohahevitra sarotra nefa tsy azo tsinontsinoavina ary manampy lanja lehibe raha tokony hividy fiara diesel ianao na tsia. Ny lava sy fohy amin'ny olana dia tsy maintsy mandeha tsy tapaka ny motera gazoala amin'ny hafainganam-pandeha avo mandritra ny 30 ka hatramin'ny 50 minitra mba hamelana ny hafanan'ny setroka hiakatra ampy mba 'hanoroana' madiodio ny setroka tafahoatra ao amin'ny sivana ary hanadio izany - lalambe. tsara indrindra amin'izany ny mitondra fiara. Midika ho an'ny dia fohy kokoa toy ny mankany sy avy any amin'ny fivarotana, mandehandeha manodidina ny tanàna na raha manana dia fohy kokoa na miadana kokoa ianao, dia mety kokoa ny motera lasantsy. Ny Diesel koa dia tsara kokoa ho an'ny dia lavitra noho ny fiakaran'ny toekarena amin'ny antsalany.
d. Firenena na tanàna mitondra fiara?
Raha any an-tanàn-dehibe ny ankamaroan'ny fiaranao dia eritrereto indroa ny hisafidy diesel. Ny fifamoivoizana fiatoana dia mety hanakatona ny sivana particulate diesel (DPFs), izay mitarika ho amin'ny volavolan-dalàna mety ho fanoloana. Misy olana etika koa eto. Ny maotera gazoala tranainy dia mamoaka oksizenina azota (NOx) sy potika bitika kokoa, izay mijanona eny amin'ny rivotra ary miteraka olana amin'ny taovam-pisefoana - olana manokana any an-tanàn-dehibe, izay ratsy kokoa noho ny any ambanivohitra ny kalitaon'ny rivotra. Ary koa, raha ny ankamaroan'ny fiaranao dia vita ao amin'ny firenena, dia mety tsara ho an'ny havoana mideza sy ny tany henjana ny fiara mandeha amin'ny fotaka na ranomandry. Mifanaraka amin'ny fiara lehibe kokoa sy mavesatra koa ny motera diesel, toy ny 4x4s, izay tsara indrindra amin'ny toe-javatra toy izany.
Ny lasantsy dia tsara kokoa ho an'ny:
Diesel dia tsara kokoa ho an'ny:
Fiara mandeha an-dalambe
Tanàna mitondra fiara
Havoana ambanivohitra mitondra fiara
Towing sy fampiasana ara-barotra
Na dia misy anton-javatra mampihetsi-po maro kokoa aza toy ny mitondra fiara na mandeha maitso: ho an'ny maro, io fanapahan-kevitra io dia midina amin'ny vidiny. Eto isika dia mandinika ny fandaniana rehetra mifandraika amin'ny fiara lasantsy sy gazoala, manomboka amin'ny vidin'ny fiara mankany amin'ny fiantohana, ny hetra, ny toekarena solika, ny vidin'ny serivisy ary ny sanda sisa.
a. Vidin'ny fividianana voalohany
Mazàna ny fiara Diesel dia lafo kokoa noho ny vidin'ny lasantsy. Ny fiakaran'ny vidin'ny gazoala dia ampahany noho ny teknolojia fanampiny ilaina amin'ny alàlan'ny fitiliana ny entona. Na izany aza, noho ny fiomanana handoa vola bebe kokoa ihany koa ny mpividy – amin'ny fanantenana hamerenana ny fandaniana any aoriana.
Ny vidin'ny fividianana fiara gazoala avo kokoa, miaraka amin'ny saram-panamboarana lozam-pifamoivoizana avo kokoa, dia mety hitarika amin'ny fiakaran'ny vidin'ny fiantohana.
c. hetra fiara
Any amin'ny faritra sasany, ny fiara gazoala dia mety hampandoavina hetra na famporisihana mifototra amin'ny famoahana gazy karbonika (CO2).
Ny vidin'ny paompy amin'ny litatra amin'ny lasantsy dia ambany kokoa, saingy izany dia mihoatra noho ny fitomboan'ny fahombiazan'ny ankamaroan'ny motera gazoala noho ny lasantsy misy vokatra mitovy. Raha fintinina dia midika hoe mpg (kml) kokoa izany. Io fahasamihafana eo amin'ny toekarena io dia miharihary kokoa amin'ny fiara lehibe kokoa, toy ny SUV lafo vidy, izay matetika ny diesel no safidy default.
e. Vidin'ny serivisy
Sary mifangaro eto. Ny motera diesel dia matetika manana elanelam-pamokarana lava kokoa, fa ny fahasarotana fanampiny dia mety hampiakatra ny vidiny - indrindra raha ilaina ny fanoloana DPF. Ho an'ny diesel maoderina maro dia mila ampidirinao ny vidin'ny additive solika. Izany dia ampiasain'ny fiara gazoala misy rafitra famotsorana ny famotsorana catalytic reduction (SCR). Mieritreritra indroa izahay ny amin'ny fividianana fiara gazoala lavitra lavitra noho ny fiantohana; Ny tahiry rehetra ao amin'ny paompy dia mety ho voafafa haingana amin'ny faktioran'ny garazy avo kokoa.
f. Soatoavina sisa
Ny fiara Diesel izay lafo vidy dia matetika mitentina isan-jato mitovy amin'izany rehefa amidy.
Karazana solika mora indrindra
Vidin'ny fividianana voalohany
Tsy azo atao ny manome didim-pitsarana mazava momba ny adihevitra momba ny lasantsy na ny gazoala, satria miankina amin'ny mpamily sy ny fomba fampiasana ny fiarany ny fanapahan-kevitra. Na izany aza, manantena izahay fa ny torohevitra nomenay nandritra ity lahatsoratra ity dia hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara. Zava-dehibe ny mijery ireo fepetra rehetra etsy ambony ary diniho tsara ny zavatra ilainao amin'ny fiaranao sy ny fomba hampiasanao ny fiaranao alohan'ny hividiananao. Zava-dehibe ihany koa, ny tsy fanenjehana amin'ny fividianana lasantsy amin'ny alàlan'ny heverin'ny haino aman-jery 'ady amin'ny gazoala'.
Na dia mendrika hodinihina aza ny adihevitra momba ny kalitaon'ny rivotra, dia mbola tsara ny mandanjalanja ny safidinao rehetra, mijery ireo lafin-javatra rehetra etsy ambony tsy misy fiheverana mialoha ny tokony hitondranao, alohan'ny hisafidiananao hividy. Amin'ny ankapobeny, rehefa mividy fiara kely sy antonony na fiara ara-panatanjahan-tena ny ankamaroan'ny olona dia misafidy motera lasantsy, ary rehefa mividy fiara lehibe sy SUV ny ankamaroan'ny olona dia misafidy gazoala satria ny motera tsirairay dia amin'ny ankapobeny dia mifanentana kokoa amin'ireo karazana ireo. ny fiara.
Na izany aza, miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia maoderina toy ny hybrid sy plug-in hybrid hybride fiara, dia miankina betsaka amin'ny fanamboarana manokana sy ny maodely ny fiara ary ny isan'ny anton-javatra hafa nojerentsika etsy ambony. Zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny mandinika tsara ny karazana fiarakodia ataonao ary mahazo torohevitra manam-pahaizana alohan'ny hanaovana safidy.
Tena mety ny fitenenana hoe 'manaova matematika' rehefa mifidy fiara lasantsy sy gazoala. Ny fiara lasantsy dia mora vidy ary ambany kokoa ny vola aloanao amin'ny paompy ho an'ny litatra tsy misy firaka. Diesel dia manome toekarena solika tsara kokoa (matetika 15-20mpg (6.4-8.5kml) amin'ny fiara fianakaviana) ary ambany kokoa ny hetra amin'ny fiara. Ny vidiny ambany kokoa amin'ny ankapobeny dia miankina voalohany indrindra amin'ny halavan'ny fitehirizanao ny fiara.